UKUVELA kwesiqephu ohlelweni iReal Housewives of Durban lapho ongunkosikazi wesihlabani sokholo esingasekho emhlabeni, u-Ayanda Ncwane etshelwa ukuthi kumele ayohlawula amacala awashiya kubo kwentombi, simangaze abaningi. Isithombe: Facebook/Ayanda Ncwane
Bongiwe Zuma | May 10, 2021
UKUVELA kwesiqephu ohlelweni iReal Housewives of Durban lapho ongunkosikazi wesihlabani sokholo esingasekho emhlabeni, u-Ayanda Ncwane etshelwa ukuthi kumele ayohlawula amacala awashiya kubo kwentombi, simangaze abaningi.
Izakhamizi zaseNingizimu Afrika nababukeli bohlelo lakwiShowmax iThe Real Housewives of Durban oselukhonjiswa kuMzansi Magic, balokhu bephawule njalo ngokuvela kwezindaba zokuthi u-Ayanda Ncwane kumele angenelele azame ukuyohlawula amacala kaSfiso Ncwane owashiya ethembise ukuyohlawula kubo kanina wengane yakhe naye oyingxenye yalolu hlelo. Kulolu hlelo lokhu kuvele njengento eyingxenye yesiko newubuntu futhi umndeni wakubo kanina wengane obona kungaba yisixazululo esingaqinisa nobuhlobo.
Ongoti bezamasiko bathi noma ikanjani ingane nonina bafanelwe ukuyohlawulwa futhi nabakubo kantombi bafanele ukubasela inhlawulo. Ungoti wezesintu nesazi samasiko uSolwazi Sihawu Ngubane uthe lokhu kusuke kudinga ngqo umuntu wesilisa ngoba amacala akhe okumele ahlawulwe uyena. Owesifazane oyingoduso noma oshade naye ephila noma engasekho emhlabeni usuke engangene nakancane.
Izakhamizi zaseNingizimu Afrika nababukeli bohlelo lakwiShowmax iThe Real Housewives of Durban oselukhonjiswa kuMzansi Magic, balokhu bephawule njalo ngokuvela kwezindaba zokuthi u-Ayanda Ncwane kumele angenelele azame ukuyohlawula amacala kaSfiso Ncwane owashiya ethembise ukuyohlawula kubo kanina wengane yakhe. Isithombe: Facebook/Ayanda Ncwane
"Akangene nakancane owesifazane emacaleni enziwe indoda yakhe ngoba noma ngabe bashadile yaphinga, kufanele kube iyona eyohlawula ingane ekhabonina. Uma kwenzeka indoda ishona ingakahlawuli, unkosikazi akangene lapho. Angikaze ngizwe ngisho emlandweni ukuthi endulo kukhona okufaka owesifazane emacaleni endoda," kusho uNgubane.
Eqhuba uthe isintu sihambisana nobuntu. Uma kwenzeka owesifazane enothando lokuqoqa izingane zendoda yakhe, kuhle futhi kuyakhuthazwa kodwa kodwa akukho okomphoqayo.
Uma kuvuka amacala endoda kusuke kufanele abakubo kantombi bayozibika kubo kandoda. " Inja ibanjelwa umnikazi wayo, uma indoda ishona kade ishiye yone komunye umuzi yaze yathola nomntwana, kumele kuyobikelwa abazali bayo ekhaya. Yibona okumele bamele lawo macala ngoba uma kuzohlawulwa komunye umuntu, kuthintwa nomsamo kubikelwe idlozi. Uma unkosikazi enesifiso sokufaka isandla, angapha abazali imali kube yisipho sabo bese bona beyisebenzisa ngendlela yabo,"kusho uNgubane.
Eqhuba uNgubane uthe okuba umqondo omuhle ukuthi owesifazane onengane engaziwa noma etholwe ngaphandle, abakubo bayombika nangalo usuku okuvele ngalo ukuthi indoda ayisekho emhlabeni ukuze uma kunesiko eligcinwayo nelingakhaleleka enganeni isheshe ilithole.
"Isiko elingagcinwa ngaleso sikhathi eliqondene nesifo kodwa uma sekukhaleleka amanye kufanele enziwe ingane seyihlawuliwe abakubo kandoda. Unkosikazi naye onezingane naleyo ndoda eshonile okumele azikhulise yedwa ngakho ukuhlawula ingane eyodwa kungabe sekusho ukuthi uma kuvela enye ingane nayo kolindeleka ukuthi enze okufanayo,"kusho uNgubane.
Omunye futhi ungoti wesintu nokukhuliswa kwezintombi, uNkk Nomagugu Ngobese ubambe emazwini kaNgubane njengoba ethe ingane ezalelwe ekhaya ngokomthetho wesintu eyasekhabonina ngoba nezinto zesintu zisuke zilindeleke komalume. "Uma kuyingane yentombazane kuze kulindeleke imicimbi efana nembeleko nomemulo yenzelwe ekhabonina lapho sithi ikomalume khona. Unkosikazi wendoda eyakutholisa untwana akahlangane nakancane nenhlawulo yengane nokugcinwa kwesiko ngaphandle uma ezenzela yena kusuka othandweni,"kugcizelela uNkk Ngobese.